musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Hong Kong Kupwanya Nhau » Shanyira Hong Kong kuti uchengetedzwe neDancing Jellyfish
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hong Kong Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Sekutanga kweguta-repakati pegungwa ruzivo rweHong Kong, Cube O Discovery Park haisi kungopa pasi pegungwa uye hupenyu hwemumvura nenzira nyowani, asi zvakare inodzikamisa gungwa rakakura munzvimbo diki yemubhubhu inounza nyanza padhuze nekubatana. vashanyi kuzvisikwa nenzira nyowani uye dzinovaraidza.
Kufukidza nzvimbo inopfuura zviuru gumi, Cube O Discovery Park ichaita musanganiswa weye chaiwo marine ekuratidzira uye inonakidza yekudyidzana multimedia mitambo, pamwe nemhando dzakasiyana dzevaraidzo, dzidzo uye mikana yekudyira.
Yakanakira kushanya kwemhuri uye zvemagariro midhiya mapikicha, Cube O iri munzvimbo nyowani mall Plaza 88 muTsuen Wan uye ndiyo yekutanga Hong Kong marine ruzivo rwekuenda kunzvimbo yeguta.
Cube O ndiro chirongwa chekutanga muHong Kong kubva kuCube Oceanarium - inozivikanwa pasi rese ye aquarium - uye mhedzisiro yekubatana kwakabudirira pakati peyemugadziri wepamusoro wea aquarium, timu yeanoshanda yekuchengetedza aquaculture timu, mukuru wezvekuchengetedza gungwa uye chipangamazano wehunyanzvi uyo akahwina maviri Akanyanya Ekuona Ekupedzisira Mhedzisiro kuHong Kong Firimu Awards.
Pakushanya Hong Kong zvakare mushure mekuvhurazve, Cube O inofanira kunge iri pane yako bhaketi rondedzero
Pfungwa iri kuseri kweCube O kugadzira yakasarudzika yegungwa ruzivo ine nyika yepasi pemvura uye hupenyu chaihwo hwemugungwa, hwakasanganiswa pamwe nekudyidzana multimedia mhedzisiro, kusimudzira meseji yekudzivirira kwegungwa
Chiitiko chegungwa chemhuri yese
Cube O yakakamurwa kuita akati wandei matunhu ane nzvimbo dzakasiyana zvinokwezva zvinosanganisira Hong Kong yekutanga acrylic hwindo fungidziro. Izvi zvinobatanidza maonero ehupenyu chaihwo hwemumvura pamwe neyakajekeswa mwenje nemumvuri mhedzisiro. Semuenzaniso, jellyfish inoratidzwa mune yekareidoscope yemavara, nepo Virtual Reality (VR) inotora vashanyi parwendo kuenda mugungwa rakadzika.
Kune zvakare Mixed Reality (MR) jellyfish kirasi, imba yekutamba yevana, uye nzvimbo yekudyira. Izvi zviitiko zvinonakidza zvinopa yakanakira mhuri-yakatarisana nezuva kunze, uye yakakwana Instagrammable nzvimbo kune vechidiki.
Kufumura yegungwa Wonderland
Nokubatanidza hupenyu chaihwo hwemumakungwa nehunyanzvi mwenje uye mumvuri mhedzisiro inoshandura yakajeka jellyfish kuita yakajeka bhora show, Cube O inotarisira kufadza vanhu nehukuru hwegungwa. Iyo yekutamba jellyfish inoita kunge vari kuita vari undersea yegungwa ballet uye vanogadzira inoshamisa mikana yemifananidzo yevaenzi.
Iyo yekudyidzana multimedia tekinoroji zvakare ichagonesa vashanyi kucherechedza hupenyu hwemumvura padhuze uye kudzidza zvakawanda nezve zvakasikwa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye maratidziro mapatani ehupenyu. Iwo akanakisa ekuona mhedzisiro ichagadzira iyo manzwiro ekuendeswa kune yegungwa Wonderland yakazadzwa nemaonero anoshamisa.
A kaleidoscope yezvisingaperi zvekufungidzira nzvimbo
Iyo jellyfish kaleidoscope inonyatso kubatanidza mifananidzo yeiyo chaiyo jellyfish, ine girazi mumvuri fungidziro, nepo marara ane mavara achiratidza asingaverengeke jellyfish mimvuri mumativi ese. Izvi zvinogadzira isingazivikanwe nzvimbo inoshanyirwa nevashanyi kuti vanonyudzwa mukati.
Iyo jellyfish Institute
Mushure meizvozvo, vashanyi vanogona kushanyira jellyfish research Institute uye vodzidza kuti jellyfish inokura sei kubva kuvacheche kuva vanhu vakuru uye vowana zvakawanda nezve jellyfish ecology uye hunhu hwemhando dzakasiyana dzejellyfish. Kunze kwekutarisa jellyfish yekupa chikafu, vashanyi vachabvumidzwawo kutaura navo kubva kune yakachengeteka zero-daro uye nekudaro vanoswedera padyo negungwa.
Iyo mitambo yekudyidzana yemultimedia ichawedzera kuwedzera ruzivo, nekuti vashanyi vanogona "kuve" hove diki, vachishambira vari pasi pekuchengetedzwa kwejellyfish murwendo rwekutsvaga mugungwa. I "hove diki" inofanirwa kuvanda pasi pejellyfish ichingwarira kubatwa nematende kana kurwiswa nezvikara zvakavanda padyo.
MuMR jellyfish kirasi, vashanyi vanogona kuve "vachengeti vegungwa" uye kununura yakamomarara girini yegungwa turtle, iyo inoda kurapwa kwakanyatso uye yakawanda yekuedza kubatsira turtle kupora uye kushambira kudzokera kugungwa.
Iyo yekununura mashandiro anotevera chaiwo tururu kununura maitiro. Vashanyi vanotora chikamu vanozokwanisa kudzidza nezve basa rehunyanzvi hwekuchengetedza, funga nezve zvinoitwa nevanhu pagungwa, uye vawane pfungwa yekutumwa zvine chekuita nekuchengetedza gungwa.
Mhuri yegungwa-yemusoro imba yekutamba uye yekudya nyeredzi shanu
Playhouse yevana inoratidzira yekutanga Hong Kong-yegungwa-themed yekutamba nzvimbo iyo vana vanogona kuwana ruzivo rwegungwa vachinakidzwa nekugona matambudziko epanyama.
Madziro ePlayhouse akapendwa nependi inoshamwaridza vana kugadzira nzvimbo yakachena uye ine hutano, saka vabereki vanogona kudya chikafu chakanaka padyo nerunyararo rwepfungwa.
Iyo paki yakoka Mushe Chef nechikwata chake kubva kuhotera yemuno shanu-nyeredzi kuti vagadzirire yakasarudzika yezvinonaka zvinonwisa mukanwa. Uye zvakare, Corner Cone, inozivikanwa kuAsia ice cream brand, yakagadzirira mhando shoma yemahombekombe egungwa-themed ice cream kunyanya kune Cube O.
Cube O inotarisira kukurudzira vanhu vazhinji kuti varemekedze uye vadzivirire vanogara mugungwa uye vapinde mukuchengetedza gungwa, nekunakidzwa nekuyemura maonero akanaka ehupenyu hwemumvura, kucherechedza hunhu hwavo, uye nepfungwa kupinda munyika yepasi pemvura kuburikidza nemhando dzakasiyana siyana dzemultimedia mitambo.
Cube O yakagadzirirwa kuve nzvimbo yekutandara, yekuzorora, uye dzidzo kune vanhu uye mhuri, pamwe nemapoka echikoro anokwanisa kuona kusiana kwehupenyu mugungwa kuburikidza neanonyudza anofambidzana maajari
n 2021, yaive yakanyorwa se5th akwariyamu akanakisa pasirese neWorld Cities Ranking webhusaiti uye akaiswa 16th mune sarudzo yemakumi mashanu emvura yakanakisa newebhusaiti yeTash Scanner.